Indawo yokuTyelela phezulu kwiOdisha | Uhlanga, uBuddhist & Textile
Odisha Tourism Tours
I-Odisha lizwe leendawo zokuvakhenketha ezihambelayo. Ukusuka kumanxweme ukuya emachibi, kwiidolophane ezihlala kwilali, kwiimifanekiso zakwaBuddhist kwiitempile zamandulo, iipaki zelizwe kwiindawo zokuhlala zendalo zasendle, iifomfle kwizikhululo zeenduli.
Ii-Orissa Tribal Destinations
Iinkcukacha zajikelele: Ixesha elihle kakhulu lokutyelela: Kukulungele ukuba nohambo lweentlanga phakathi ko-Okthobha-Matshi. Indlela yokuthutha: I-Toyota-Innova / iTavera / i-Scorpio / i-Tempo Traveler kuxhomekeke kubukhulu beqela. Silungiselela indawo yokuhlala yehotele kwiindawo zeentlanga kwaye rhoqo uzama ukubonelela ngamagumbi / iinkorhwebo ezifanelekileyo kule mimandla ukuze ufumane uncedo olukhulu.
Orissa Buddhist iindawo
I-Ratnagiri yakuba yindawo yeSahavihara, okanye i-monastery enkulu yaseBuddha, kwiBrahmani naseBirupa umlambo wamanzi eJajpur kwisithili sase-Odisha, eIndiya. Yayinxalenye yeYunivesithi yasePuspagiri, kunye neLalitgiri ne-Udayagiri. I-Ratnagiri yasungulwa ngaphandle kokulawula kookumkani waseGupta uNarimimha Baladithaya kwisiqingatha sokuqala sekhulu lesithandathu CE, kwaye yaphumelela kwada kwada kwanekhulu leshumi elinesibini CE.
Iintlanzi zeNtshontsho zeTektile zoTyelelo ziya kukubonisa oku kunye nokunye okuninzi. Uhambo lwethu lwe-Odisha Textile Tour kunye ne-Golden Triangle yindlela ofuna ukuba nayo. Inkqubo yeholide yosuku lwe-14 kwaye ihlanganisa i-Bhubaneswar, iNuapatna, neManabandha edume nge-Olasingh Textile Village, Village Village ye-Chikiti, i-Sambalpuri Textile Village ezungeze iSagarpalli kunye ne-Buttupalli, i-Barapalli Textile Village, i-Attabira Textile Village, i-Sericulture Projects kunye ne-Tussar Silk Village njengeFatipur